विवादै विवादमा इश्वर पोखरेल – हाम्रो देश
विवादै विवादमा इश्वर पोखरेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल जहाँ जोडिनुहुन्छ त्यहीँ विवाद मात्र जन्मन्छ । उदाहरणमा हेरेौँ, ओम्नी, सीसीएमसी, सेना, पार्टी फुट र अहिले तक्मा वितरणमा । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दाहिने हात मानिनुहुन्छ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल । उहाँ तीन वर्षदेखि प्रत्यक्ष जोडिएका छन् विभूषण समितिमा ।
२०६४ सालमा विभूषण ऐन बनेपछि ०६७ सालमा २ सय ६९, ०६९ सालमा १ सय ६४, ०७० सालमा १ सय ८९ जनालाई तक्मा वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, ०७५ सालमा ५ सय १८, ०७६ सालमा ६ सय ३३ लाई दिइएको छ । ०७७ सालमा ५ सय ९४ लाई बाँडिँदै छ ।
२०७४ पछि विभूषण समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका कारण विभूषण बदनाम हुँदै र बहिष्कार गर्नेहरू बढ्दै गरेको व्याप्त छ । त्यसो त विभूषण वितरणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड नै बनाएको छ । जसमा २ सयभन्दा बढीलाई तक्मा नदिने नीति अख्तियार गरिएको छ । तर अचम्म–तक्मा पाउनेको सूचीमा २२ जना गृह मन्त्रालयकै कर्मचारी रहेका छन् ।
विभूषण समितिका सदस्य सचिव एवं गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले चाहिँ साढुभाइलाई तक्मा दिने व्यवस्था मिलाएका छन् । यसरी नियमबमोजिम तक्मा वितरणको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ ।एक साताको बीचमा झण्डै २१ करोड खर्चेर १ हजार २ सय २७ जनालाई मानपदवी, अलंकार र विभूषण वितरण गरिएको छ । गएको शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ६ सय ३३ लाई र नयाँ वर्षका दिन ५ सय ९४ जनालाई विभूषित गर्नुभयो ।
कस्लाई विभूषण प्रदान गर्ने ?
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा यस ऐन बमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सक्ने विभूषण ऐनमा उल्लेख छ ।
विभूषण ऐनको (२) को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएकोभए तापनि कुनै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वा नेपालको हितको लागि विशिष्ट योगदान पु¥याउने विदेशी नागरिकलाई नेपाल सरकारले सम्मानस्वरुप विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ ।
र, ऐनको उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रदान गरिने विभूषण नेपाल सरकारले तोकेको कुनै राष्ट्रिय दिवसका दिन प्रदान गरिने भनिएको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदान गर्नुभएको विभूषणलाई नियाल्दा त्यस्तो कुनै ख्याती कमाएका व्यक्तिले तक्मा पाएको देखिँदैन ।
उदाहरण नै हेरौँ
केहीअघि सरकारी पत्रिका गोरखापत्र दैनिकमा एउटा लेख छापियो, सुनसरीका साहित्यकार बद्रीविशाल पोखरेल । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुणगानको लामो लेख लेख्नुभएको छ । त्यहीँ गुणगानबापत पोखरेल सुप्रवल जनसेवा श्री (तृतीय) बाट विभूषित हुन लाग्नुभएको छ ।
अहिले सरकारका ६ सचिव विभूषितको सूचीमा रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवालले दुईवटा पदक थाप्दै छन्, सुप्रवल जनसेवा श्री (तृतीय) र समाजसेवा रत्नबाट । यता, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका मोतीलाल दुगडको सिफारिसमा मारवाडी व्यापारी तुल्सीराम अग्रवाल, हिरालाल केडिया, शंकरलाल अग्रवाल, अरबिन्द अग्रवालले पनि विभूषण थाप्दै छन् ।
यसरी वर्षेनी तक्मा र विभूषणमा मनपरीतन्त्र बढेसँगै विभिन्न माध्यमाबाट यसको बहिष्कार भइरहेको छ । उदाहरणका लागि अस्ति बाँडिएको तक्माबाट चुच्चे नक्सा गायब बनाइयो । पछि गृह मन्त्रालयले त्यसको स्पष्टीकरण नै दिनुपरेको थियो ।
तक्मामा चुच्चे नक्सा नसमेटिएपछि सोमबार सञ्चारकर्मी लक्ष्मी पुनले गृहको आभूषण शाखामा पुगेर तक्मा फिर्ताका लागि निवेदन चढाएको बताइएको छ । यसअघि पशुपति शर्मा, महजोडी, शिव गाउँले, झलक सुवेदीझैं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु श्रेष्ठ, नीलकण्ठ उप्रेतीलगायत झण्डै तीन सयले तक्मा बहिष्कार गरिसकेका छन् । कलाकारतर्फ दिनेश डिसी, विल्सम विक्रम राई, निखिल उप्रेती, बसुन्धारा भुसाल, धीरज राई, स्वेता खड्कालगायत कलाकारले भने बैशाख १ गते तक्मा प्रदान गरेका छन् ।
तक्माको मूल्य कति ?
सबैभन्दा महंगो तक्मा हो, नेपाल रत्न । जसको मूल्य १३ लाख पर्दछ । आठ कोणको मणिबाट बनेको यस तक्मामा हिरा, सुन र मिना जडित हुन्छ । यसको व्यास ८.५ सेन्टिमिटर रहने बताइन्छ । अन्य तक्माहरुमा राष्ट्रगौरव, राष्ट्रदीप , प्रवल र सुप्रवल जनसेवा श्री रहेका छन् । जसमा सुन, हीरा, मुगा जडित हुन्छन्् । जस्को मूल्य ४ देखि १० लाख सम्म पर्ने बताइन्छ ।